Ikhaya AMERICAN STARS Salomon Rondon Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Isikweletu kumawebhusayithi e-PremierLeague naseCronica
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Gladiator". I-Salomon Rondon Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Fact kuwe kuwe akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumuntu okwazi ukwamukela noma ukubekezelela ukulibaziseka komsebenzi, okwenza kube omunye wabadlali abanesifo esibhedlela kakhulu owake waba khona. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka uSolomon Rondon's Biography okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
USolomon Rondon Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts- Isendlalelo sokuqala nokuphila komndeni
UJosé Salomón uRondón Giménez wazalwa ngosuku lwama-16th ngo-Septhemba 1989 kunina, uMaitana Giménez (umgcini wendlu) nobaba, uJosé Rafael Rondón (uthisha wamakhemikhali) emkhakheni wezinhlanga eziningi eCatia, eCarzuela. Ngezansi isithombe sabantwana bakaSolomon Rondon abathandekayo.
Abazali bakaSolomon Rondon- MOTHER- Maitana Giménez noFATHER-José Rafael Rondón (Isikweletu IG)
Ukuzalwa kukaSolomon Rondon kwakunqunywe ngaphambili ngokusho kukayise owayeke wabikezela indaba yendodana yakhe ngaphambi kokubeletha.
"Umkami, lapho ekhulelwe wayenesisu esikhulu kakhulu. Futhi ngaleso sikhathi, udadewethu wayemthandayo Diego Maradona ngenxa yeNdebe Yomhlaba ye-1986. Kuvela ukuthi njalo lapho sibona umdlalo lapho Maradona wadlala, ingane uSolomon yayizokhahlela kakhulu esibelethweni sikanina. Ngenxa yalokho, udadewethu wathi indodana yami engakazalwa yayizoba umdlali webhola lezinyawo futhi uqinisile. UJosé Rafael Rondón uyakhumbula.
U-Rondon wagcina esezalwa njengendodana yesibili kubazali bakhe emndenini wakhe womkhaya ophakathi. Wakhula nabafowabo, uGerardo oneminyaka emithathu ubudala nomfowabo omncane u-Onlymai oneminyaka engu-3 engumfana wakhe.
USolomon Rondon Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi Wokuqala
USolomon Rondon waqala ukugcina isiphetho sakhe ngokushesha njengoba ehamba, ekhahlela futhi elala ibhola njalo ebusuku. Ukubamba iqhaza kwakhe eqenjini eligijima kulokhu okwakususa ekukhethweni okungalungile ayengayenza lapho eseyingane.
"Kusukela ngizalwa ngihlala ngihamba nebhola futhi ngishaya konke. Ngineminyaka emine ubudala ngaqala ukudlala esikoleni sami. "
Ngesikhathi esemncane ka-4, uRondon wayamukele izithombe zakhe Rivaldo futhi URonaldo Luís Nazário de Lima.
Isinqumo sokudlala ibhola esikoleni safika ngolunye usuku lapho uthisha kaRondon efuna ukunxusa unina, uMaitana ukuba avumele indodana yakhe ukudlala ibhola emakhotho angcolile esikoleni. Wamukela futhi uRondon waqala ukudlala ibhola esikoleni emini. Impumelelo yakhe yezemidlalo yokuqala yafika phakathi nemidlalo yokuncintisana esikoleni lapho eyinqobe yakhe yokuqala.
Rondon First Sporting Impumelelo- Credit kuya clubGulima
Ngisho nangemva kokubuya esikoleni, ibhola laliyisidingo. Lokhu kwamenza wabhalisa ebhokisini lakhe lentsha yaseSan José de Calasanz eyamnika ithuba lokudlala ibhola ebusuku. U-Rondon wasebenzisa ibhola njengomsebenzi ohambelana nezifundo, oye wehla njalo ngaphansi kokuqondiswa kwabazali bakhe abakha umkhuba wokugcina izithombe ze-albhamu zezinkumbulo zebhola zakuqala zendodana yabo.
Ubaba kaSolomon Rondon ubonisa ukuthi indodana yakhe yaqala ukuphikisana ne-albhamu- Credit to Cronica.
USolomon Rondon Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
Uthando lukaSolomon Rondon lwebhola luye lwazizwa, ngezinye izikhathi lubi kabi ekhaya lakubo. Lesi yisikhathi uRondon nomfowabo uGerardo bajabule ngokuwaphula amafasitela, amakhaya nama-vases.
USolomon Rondon waphule amafasitela asekhaya ngebhola lakhe lebhola njengengane (i-Credit to PixaBay)
Ukuthola ukukhwabanisa okukhulu kwabazali bakhe kwaholela ekubeni umama wakhe etshele uRondon ukuthi kuzodingeka akhokhe izibuko lapho eqala ukuthola imali njengomdlali webhola.
Ukwenza Isinqumo Esikhulu:
U-Rondon wenza isinqumo esikhulu lapho esesesikoleni sakhe sesibili esikoleni esiphakeme saseCalasanz. Wabhekana nobaba uRafael ukuba abe nalokho ayekubheka ingxoxo ebaluleke kakhulu nomfundisi we-chemistry.
"Ungitshele ukuthi uzohamba esikoleni ukuze adlale ibhola," uyise ukhumbula.
USolomon Rondon ekugcineni wenza isinqumo esingenakuqhathaniswa sokushiya imfundo yakhe yasekolishi futhi uzibophezele ngokuphelele emdlalweni webhola. Isinqumo esinjalo salandelwa ukufaka ohlwini lweqembu leDemortivo Gulima ngemuva kwesilingo esiphumelele.
I-ID ye-ID ye-Salomon Rondon Deportivo Gulima (Isikweletu ku-ClubGulima)
USolomon Rondon Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Ngesikhathi eseDomortivo Gulima, uSolomon Rondon wayebheke eYurophu. Ukuze aphishekele lokho, wanquma ukuqhubeka nokuvuthwa kwakhe kwebhola e-Aragua, iqembu leColumbian elinedumela lokudlala abadlali eYurophu. U-Rondon wenza umthelela omkhulu e-Aragua waba yindaba enkulu yezindaba zeqembu.
USolomon Rondon's Road eya edumo (Isikweletu kuCumpleañosdeFamosos)
Ukuphumelela okuqhubekayo kwamenza wakhuthazwa eqenjini eliphezulu leqembu kodwa nje ngemva kokujoyina intsha yabo. U-Rondon eneminyaka engu-17 wenza i-debut yakhe ePrezuelan Primera División. Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba abhalwe ukuthi ungumhlaseli omuhle ezweni lakhe.
Indaba kaSomlomo kaSolomon Rondon nge-Aragua (Isikweletu ku-AS)
Ngalo nyaka u-2008, uRondon amaphupho okuzodlala eYurophu waba ngokoqobo ngemuva kokuba eshaywa I-UD Las Palmas eSpain. Ekhuluma ngaleyo nkathi engokomzwelo yokushiya ekhaya, uRondon wake wathi ...
"Ukushiya umndeni wami eYurophu kwakuyinto enzima kunazo zonke. Amazwi ami wokugcina omama kimi athi 'Hamba!' Umama wami wayekhala lapho ethi lokho. Ngakhala nami. Ngangingu-19 ngaleso sikhathi kuphela. Ngangingazi lutho - Ngangingazi kanjani ukupheka ... Ngangihlala e-Skype ngithi, 'Mama, ngingaba kanjani ukupheka i-pasta ?!' Umkhulu wami wayefana nokuthi, 'Beka amanzi epanini futhi ...!' "
EYurophu, uRondon waphumelela futhi wathola ukudlala eMalaga. Akazange athathe isikhathi eside ukwenza umqondo ngeqembu. Uthi bewazi?… Ngesikhathi eseMalaga, uRondon owayesekhulile waphuma endaweni yokugibela imigomo Ruud van Nistelrooy ukumcasula futhi kamuva wamcindezela ukuba angene emhlalaphansi.
USolomon Rondon Ukhazimula Udumo (Isikweletu Sezikhulumi Zezinkulumo kanye ne-20Minutos)
USolomon Rondon waqhubeka eyiqhawe kusukela ngemuva kokugqoka iRuud van Nistelrooy osekhulile. Ngenxa yefomu lakhe, Wadlula amarekhodi weLaLiga amagoli athola umdlali wezemidlalo waseVenezuela Juan Arango. I "UMsindisi waseMalaga"Wayebizwa ngokuthi yena uqobo lwakhe osiza iSpanishi ukuba ibalekele.
USolomon Rondon uba nguMsindisi waseMalaga (Isikweletu Instagram)
USolomon Rondon Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
I-romance ye-Salomon Rondon yilapho ephunyuka ekuhlolisweni kweso lomphakathi ngenxa nje yokuthi impilo yakhe yothando ayiyidrama. Ngemuva kwe-Venezuela ephumelelayo, kukhona umfazi othakazelisayo nezingane ezinhle.
Umkami uSolomoni WamaRondon nezingane (Isikweletu kuSolomon Rondon's Instagram)
USolomon Rondon njengesikhathi sokubhala ehlala eNewcastle ukuthi ukholelwa ukuthi "idolobha elikhulu"Emndenini wakhe. "Umkami, izingane zami ezimbili, umkhwekazi, umkhulu womkami, nginomndeni wami nxazonke," kusho uRondon,
USolomon Rondon Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukukwazi impilo kaSolomon Rondon kuyokusiza ukuba uthole isithombe esiphelele kuye. Ukuqala, ungumuntu onendlela yokuphila eqinisekisa ukuthi ubeka isinqumo sokufuna injabulo ngaphezu kwazo zonke izinto.
Ukushiya ukufaka imigomo emigodini, uSolomon Rondon usebenzisa isikhathi esiwusizo ekwenzeni umsebenzi webhokisi okholelwa ukuthi ukwandisa amandla akhe angaphezulu. Ngezansi ividiyo yokusebenza okunjalo.
U-Rondon ukholelwa ekubhokiseni njengemidlalo yokuzivikela. Kule vidiyo ngezansi, uyakwazi ukubeka ibhokisi ngokusetshenziswa kahle ngokufundisa ingane yakhe ukuthi ingazivikela kanjani futhi ingalokothi isebenzise imidlalo njengendlela yokubheka izinkinga.
Ukusuka eSt James 'Park, edlala nezingane zakhe kanye nebhokisi, uRondon uthola injabulo ngokuhamba nenja yakhe.
USolomon Rondon kanye nenja yakhe (Credit to The Mirror).
USolomon Rondon Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
Ukuba ngumdlali webhola lakhe elidume kakhulu ezweni lakhe kanye no-Premier Premier omele i-Premier League, ngokuqinisekile kwenza umndeni kaSolomon Rondon nezwe lakhe lonke abantu baziqhenya ngaye. Abazali nabafowabo bakaSolomon Rondon bahlala eCaracas, eVenezuela ngesikhathi sokubhala. Leli zwe elingazinzile kwezombangazwe ngenxa yenkinga yezomnotho nezombangazwe eqhubekayo.
Izwe likaSolomon Rondon e-Turmoil (Isikweletu ku-NBC News and Khilafah)
Njengoba ukwehla kwamandla emali kuphuma ekulawuleni, ubugebengu obunobudlova bukhulu futhi izinga lokubulala liyesabeka eVenezuela. Ekhuluma ngezingozi zabathumbi, uRondon ushilo;
"Bambalwa abantu abazi ukuthi umndeni wami ungubani futhi ngizama kakhulu ngangokunokwenzeka ukuthi ababonwanga nami - hhayi neze eVenezuela. Uma nginabo, njalo uhlala ekhaya. Asike siphume ndawonye ukuze singaboni. Ngizama ukungenzi lutho kimi uma ngilapho. "
Naphezu kokukhathazeka kokuphepha, uRondon akanamahloni ukuthatha izithombe nabazali bakhe ikakhulukazi ubaba wakhe othandekayo ovela ekubeni uthisha wamakhemikhali kamuva waba profesa wamakhemikhali kwesinye sezikole zempi zaseVenezuela.
Salomon Rondon ukuphumula noyise (Credit kuya Instagram)
USolomon Rondon Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso angaziwa
Mayelana nesiteketiso sakhe seGladiator:
Ngokusho the Mirror, USolomon Rondon wabonisa ukuthi uyathanda ukubizwa ngegama lakhe lesidlaliso ... "The Beast. "Ngesikhathi sakhe eMalaga. Lapho bejoyina i-Newcastle, abalandeli baqala ukumbiza ngokuthi "Gladiator"Okungukuthi igama lakhe elikhetha kakhulu.
"Ngithanda isiteketiso 'iGladiator'. Yilokho engizama ukukuba khona emgqeni. Ngivula izandla zami, ngibukeka nginkulu, ngithola umzimba wami endleleni futhi ngizama ukulawula ibhola eqembu lami. "
Ngemuva kokulayisha ividiyo ye-Gladiator Skills, uRondon wanquma ukwenza abalandeli bakhe bancintisane ngomklomelo ngokucela ukuthi bathumele amavidiyo wezingcingo zabo ezinhle kanye nezinkinga nanoma iyiphi into engeyona ⚽ isebenzisa i-hashtag #GladiatorSkillz #Gladiador #Gladiator. Ngezansi i-Salomon Rondon's Gladiator Video.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Salomon Rondon Childhood Story kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.